Degso Transcriber APK loogu talagalay Android
Bilaash Degso loogu talagalay Android (16.00 MB)
Transcriber waa codsi bilaash ah oo Android ah oo aad u adeegsan karto inaad ku duubto farriimaha codka WhatsApp/duubista codka ee lagula wadaago. Haddii dhegeysiga wada sheekaysiga daqiiqado-dheer ah ee saaxiibbadaada ama qoyskaaga ee WhatsApp uu yahay mid daallan, waa inaad isku daydaa codsiga Transcriber, kaasoo awood u leh inuu u beddelo farriinta codka fariin qoraal ah.
Sida loo qoro farriinta codka WhatsApp ee Android
WhatsApp ma bixiso awoodda loogu beddelo farriimaha codka qoraalka. Waxaad u baahan tahay inaad rakibto codsi dheeri ah si aad uga hesho duubista codka dadka aad la xiriirto qaab qoraal ah halkii aad isla markiiba dhegeysan lahayd. Qoraaga WhatsApp ee Dukaanka Google Play waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aad u adeegsan karto tan.
Kadib rakibidda dalabka, waxaad furi doontaa WhatsApp oo dooro farriinta codka aad rabto inaad turjunto. Waxaad u dirtaa farriinta codka adiga oo adeegsanaya muujinta Wadaagga oo leh arjiga Transcriber. Markaad isticmaasho arjiga markii ugu horreysay, waxaa la codsadaa oggolaansho lagu galo xusuusta taleefanka. Wicitaanka WhatsApp wuxuu faylka maqalka u geliyaa daruuraha iyada oo aan la shaqeynin oo la akhrin waxa ku jira farriinta codka.
Dooro farriinta codka ee aadan dhageysanayn.
Adeegso muujinta wadaagista WhatsApp oo u tilmaan Tarjumaanka.
U oggolow barnaamijka inuu galo xusuusta gudaha ee casrigaaga.
Waxaad hadda ku arki kartaa nuxurka farriinta codka qaab qoraal ah. Ka dib marka la farsameeyo, waxaad ka arki kartaa shaashadda waxyaabaha ku habboon. Waxaad markaa koobi kartaa qoraalka la turjumay ama ku wadaagi kartaa codsi kale. Qoraalka la turjumay waxaa loo dhoofin karaa qoraal cad, PDF, RTF, HTML, SYN, NVivo Transcripts iyo F4 transcription.
Cabirka Faylka: 16.00 MB
Horumar: PhD Researches